नवराज कुँवर काठमाडाैं, ८ असार
भ्रष्टाचार अर्थात् भ्रष्ट आचार । भ्रष्ट अर्थात् खराब, बिग्रेको तथा आचार अर्थात् आचरण । भ्रष्टाचारको शाब्दिक अर्थ, त्यो आचरण, जो कुनै प्रकारले अनैतिक र अनुचित छ ।
धेरैले पैसा लिनु वा दिनु (घूस)लाई मात्र भ्रष्टाचार ठान्छन् । अर्थात् आर्थिक भ्रष्टाचारलाई मात्र जोडेर हेर्ने गरिन्छ । तर, यसो होइन । आर्थिकभन्दा खतरनाक त नैतिक, सामाजिक, नीतिगत भ्रष्टाचार हुन् । पद वा अधिकारमा भएको व्यक्ति वा निकायले सार्वजनिक अहित हुने गरी भइरहेको काममा आँखा चिम्लिनु पनि भ्रष्टाचार नै हो ।
नेपालमा भ्रष्टाचारले नेता, मन्त्री, उच्च सरकारी कर्मचारीदेखि गाउँको सामान्य वडा सदस्यसम्म साइनो जोडेको देखिन्छ । त्यसैले विश्वका १ सय ८० मुलुकमध्ये ३४ अंकका साथ भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपाल १ सय १३औँ स्थानमा छ ।
यसरी सबैतिर भ्रष्टाचारले साइनो जोडेको देखेर गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई समेत लाज लागेछ । उनले आइतबार प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति समितिले आँखा चिम्लेकाले आफूले राजीनामा दिनुपरेको उनले बताएका छन् । गत माघमा मनाङेले एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै झापड हानेका थिए ।
उनलाई रिस नउठोस् पनि कसरी ? यहाँ कुनै व्यक्ति घूस खाएको आरोपमा समातिन्छ र घूस खुवाएरै छुट्छ ।
रमाइलो कुरा के हो भने कुनै बेला व्यवसायीलाई धम्क्याएर ‘हप्ता’ असुली गर्ने दीपक मनाङेमा समेत बढ्दो भ्रष्टाचारले दिक्कदारी पैदा गरेको छ । अब हामी आफैँ अन्दाज लगाउन सक्छौँ, आमनागरिकमा यसले कति वितृष्णा पैदा गरेको होला !
भ्रष्टाचार एउटा बिमार जस्तै हो । नेपालमा भ्रष्टाचारले तीव्र रूपमा पखेटा फिजाइरहेको छ । यसको जड उसैगरी गहिरिँदो छ । जीवनको कुनै पनि क्षेत्र यसको प्रभावबाट मुक्त छैन ।
अघिल्लो वर्षका काण्ड भुलेर यही वर्षको कुरा गरौँ न ! महामारीका समयमा औषधि खरिद गर्दा करोडौँ रकम हिनामिना भएको चर्चा सेलाइसकेको छैन । जीवन नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ताले विश्व आक्रान्त भएका बेलासमेत ‘मिलाएर कुम्ल्याइहालौँ’ भन्नेहरू भेटिनुले देश भ्रष्टाचारको कुन स्थितिमा छ भन्ने दर्शाउँछ । अस्ट्रेलियाली लेखक कार्ल क्रसले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचार वेश्यावृत्तिभन्दा खत्तम हुन्छ । वेश्यावृत्तिले कुनै व्यक्तिको नैतिकतालाई खतरामा पार्छ तर भ्रष्टाचारले निर्विवाद रूपमा पूरै देशको नैतिकतालाई खतरामा पार्छ ।’
महामारीमा भएको भ्रष्टाचारले हाम्रो मुलुकको छविका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुन स्तरको स्केच कोर्‍यो होला ?
आज हामी पुँजीवादी व्यवस्थाको जञ्जालले घेरिएका छौँ । र, जति तीव्र रूपमा पुँजीवाद बढ्छ, उति नै तीव्रताका साथ यसले भ्रष्टाचार र अव्यवस्था बढाउँछ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ ।
मुलुकमा सिद्धान्ततः भ्रष्टाचारीको कट्टर दुश्मन मानिने कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार छ । सुन्नलाई मीठो लाग्ने ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’को नारा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले फलाकिरहन्छन् । तर, व्यवहारतः भ्रष्टाचारीलाई छाता ओढाउने, सफाइ दिने र उसको पक्षमा वकालत गर्ने काममा हात धोएर लाग्ने उनीहरू नै हुन्छन् । त्यसैले त न ‘वाइडबडी काण्ड’ किनारा लायो, न ‘बाँस्कोटा प्रकरण’ वा ‘बालुवाटार काण्ड’ नै ।
अमेरिकी लेखक, राजनीतिज्ञ रोन पलले भनेका छन्, ‘जब कुनै व्यक्ति सरकारसँग ओछ्यानमा सँगै सुतेको छ, उसले यसबाट फैलिने बिमारका लागि तयार हुनुपर्छ ।’
तर, नेपालमा यस्तो कुराको ख्याल कसले गर्ने ?
यहाँ भएका सबै काण्डमा कि त सत्तारुढ पार्टीकै प्रभावशाली नेता जोडिएका छन् कि सरकारका मन्त्री । केन्द्रमै यस्तो भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहको हालत के होला ? अनि दीपक मनाङे किन नरिसाऊन् ? भ्रष्टाचार र अव्यवस्था यसैगरी फैलिइरहने हो र मनाङेले आँटे भने यस्तो दिन पनि नआउला भन्न सकिँदैन, जहाँ भ्रष्टाचारविरोधी ठूलो अभियान चलिरहेको हुनेछ र त्यसको नेतृत्व कुनैबेला ‘गुण्डा नाइके’ कहलिएका दीपक मनाङेले गर्नेछन् । त्यतिबेला लोकले कसलाई ‘कुरीकुरी’ भन्लान् ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ८, २०७७, १८:२७:००
अन्तरिक्षमा कहिले पुग्लान् नेपाली ?
कसले हटाउन खोज्यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई ?